के हामी कोरोना प्रुफ बन्दै गएको हो!
के हामी कोरोना प्रुफ बन्दै गएको हो! (फोटो फिचर)
महोत्तरी- साउने सोमवारी जलेश्वरनाथ महादेव मन्दिरमा भक्तजनहरुको घुईचो थियो । गाउ गाउबाट देउतालाई खुशी पार्न भक्तजनहरु अत्यधिक संख्यामा आएर जलेश्वरको शोभा वढाएकै हो ।
त्यस्तै साताको दुई दिन लाग्ने हटिया बजारमा पनि टन्नै मानिसहरुको भिड देखिन्छ । दैनिक उपभोगका तरकारी लगायतका सामानहरु किन्न कोचिएर सवै बजार पुगेका हुन्छन् । मन्दिर आएका,बजार आएका तथा अन्य विभिन्न काम विशेषले आएकाहरु मध्ये अधिकांशको अनुहारमा मास्क देखिदैन । न त कहि कतै सामाजिक दुरी नै कायम भएको देखिन्छ । केहि महिना पुर्व यस्तो भिड शौभाग्यकै कुरा भएपनि वर्तमानमा भने यस्तो भिड अभिशाप हो । मास्क नै नलगाएको भन्दै सोमवार विहानै सय भन्दा वढी मोटरसाइकल चालकलाई प्रहरीले रोकेर राखेको समेत देखियो तर फरक भने देखिएन । जनताले कोरोनालाई हावादारी रोगकै रुपमा लिएको देखियो ।
विश्व नै कोरोनासंग आक्रान्त रहेको वेला भने यस्तो भिड घातक हो । राजविराज,विरगंज लगायतका स्थान अहिले कोरोनोको हटस्पट बन्दै गएको छ । समुदायमै कोरोना फैलिएको अवस्थामा नजिककै प्रदेशको राजधानी जनकपुर र सोको छेउको जलेश्वर समेत जोखिम मुक्त छैन । महोत्तरीमा हालसम्म ८३८ जना कोरोना संक्रमित भइसकेकोमा सो मध्ये ३३६ उपचार पश्चात घर फर्किसकेका छन । ५०१ उपचार मै आईसोलेशन र होम आईसोलेसनमा छन भने एकजनाले ज्यान नै गुमाईसकेको छ । तर अझै कोरोना प्रतिको सचेतनामा स्थानिय,प्रदेश र केन्द्र सरकारले लगाएको लगानी वालुवामा पानी भन्दा फरक नपर्ला ।
सुरक्षा निकायहरुबाट भने भिडभाड रोक्न प्रयास भने नभएको होईन तर विभिन्न बहाना वनाउदै जानी जानी भिडमा जाने रोगलाई गम्भिरताका साथ नलिने हामी नेपालीको बानी नसुध्रिए देशमा कोरोनाको अझै भयावह अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।
जलेश्वर फोटोहरु : रञ्जन भण्डारी
बोलबम फोटोहरु: धर्वेन्द्रकुमार यादव ‘यदुवंशी’
Tags: हामी कोरोना प्रुफ